Howl galkan ayay Ciidamada Booliska ka sameeyeen degmada Dharkeenley, waxaana ay ku galeen guri lagu diyaarin jiray waraaqaha digniinaha ee maalmahan lagu daadinayay xaafadaha Muqdisho.
Ninka lagu soo qabtay falkan oo lagu eedeeyay inuu waraaqaha u daadin jiray Al-Shabaab ayaa caan ka ah magaalada, waxaa dadka ay u yaqaanaan Idaacada Wareegta, iyadoo ninkan uu iska dhigo cododka wariyeyaasha.
Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Islow, Taliye kuxigeenka Booliska iyo saraakiil ciidan ayaa ku sugnaa goobtii lagu soo bandhigay raggan, waxaana saxaafada ay u sheegeen inay
Saraakiisha Booliska ayaa sheegay inay baaritaan ku wadaan kooxdan lagu soo qabtay qalabka daabaacada iyo waraaqo digniin ah oo Al-Shabaab magaalada ku daadinayeen, si khal khal lagu geliyo shacabka Muqdisho.
Sakiriye C/laahi Cilmi oo ah gudoomiye waaxeed ka tirsan Degmada kaxda ee Gobolka Banaadir oo la hadlay warbahinta ayaa tilmaamay inay Ciidamadu gacanta ku guuleesteen in ay miinada ka saaraan halkii lagu aasay isagoona sheegay inay Ciidamada aamanku furfureen miinada.
Ciidamada amaanka ayaa wada dadaalo ay kaga hortagayaan dhagarta ay maleegayaan malayshiyaadka Alshabaab waxaana ay bishaan gudaheeda fashiliyeen qaraxyo badan oo lagu dhibaateyn rabay Shacabka Soomaaliyed.
Saraakiisha dowlada Soomaaliya ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegay in maanta uu isku soo dhiibay Sarkaal sare oo ka tirsanaa Al Shabaab oo kaas oo ka mid ahaa Hogaamiyaasha Ciidanka ee Al Shabaab.
Milatariga dowlada Soomaaliya ee Gobalka Hiiraan ayaa sheegay in Sarkaal isku soo dhiibay lagu Magacaabo Bishaar Muumin Faarax kaas oo meelo badan ka soo hogaamiyay Dagaalamayaasha Ururka Al Shabaab.
Ilaa iyo hada majiro wax war ah oo kasoo baxay Ururka Al Shabaab ee ku aadan Sarkaalkaa isku soo dhiibay Ciidamada dowlada Soomaaliya gaar ahaan qaybta Gobolka Hiiraan.